KVNschik ग्रेगरी Malygin: जीवनी, रचनात्मक गतिविधि र मृत्यु को कारण
कला र मनोरंजन, हास्य
ग्रेगरी Malygin - KVN खेल को सबै प्रशंसक थाह पहिलो र थर। 2012 मा, त्यो मृत्यु भयो। हामी त्यो जन्म भएको थियो जहाँ कुरा हुनेछ आज, उहाँले अध्ययन र यो एक लोकप्रिय कलाकार कसरी भएको छ। लेख पनि आफ्नो मृत्युको कारण घोषणा गरिनेछ।
ग्रेगरी Malygin जुन 24, 1970 मा जन्म भएको थियो। आफ्नो गृहनगर Seversk (टम्स्क क्षेत्र) छ। Grisha पिता र आमा दृश्य कुनै सम्बन्ध थियो। तिनीहरूले - प्रौद्योगिकी पेशों को प्रतिनिधिहरु।
एक प्रारम्भिक उमेर हाम्रो नायक रचनात्मकता देखाए। केटा सुन्दर चित्रित र घर संगीत संगठित प्रेम गर्नुभयो। उहाँले हास्य को एक महान अर्थमा थियो।
स्कूलमा, Grisha राम्रो विद्यार्थी थियो। तीन र दुई आफ्नो डायरी मा अत्यन्तै दुर्लभ छ। उच्च विद्यालय मा, मान्छे खराब कम्पनी संग सम्पर्कमा पायो। आफ्नो शैक्षिक प्रदर्शन नाटकीय बिग्रन छ। तर उहाँले आफैलाई सँगै पुल र उच्च विद्यालय समाप्त गर्न सक्षम थियो।
प्रमाणपत्र मा आफ्नो हात प्राप्त, Grigory Malygin टम्स्क गए। त्यहाँ उहाँले ईन्जिनियरिङ् र निर्माण विश्वविद्यालय मा भर्ना। आमाबाबुले आफ्नो छोरा गर्व थिए। तर ग्रेगरी त्यहाँ रोक्न छैन लाग्नुभएको थियो। पछि वर्ष मा, त्यो Altai मा संस्कृति र कला को संस्थान र राजधानी "Ostankino" टिभी स्कूल स्नातक।
को टम्स्क विश्वविद्यालय को पर्खालहरु भित्र ग्रेगरी विविधता लघु को एक थिएटर "लक्स" सिर्जना गरियो। यो पाठ्यक्रम सबैभन्दा सक्रिय र प्रतिभाशाली मान्छे पनि समावेश छ। Malygin पछि टोली नेतृत्व "टम्स्क trumps।" टोलीमा लीग "KVN-साइबेरिया" अन्तर्गत प्ले। आफ्नो पैतृक क्षेत्रमा सफलता भए तापनि Grisha व्यापक ख्याति को सपना देख्यो। र जब भाग्य उहाँलाई त्यो मौका दिनुभयो।
1996 देखि 2008 को। उहाँले कलात्मक निर्देशक र टीम "लेफ्टिनेन्टस्क्याट श्मिट को बच्चाहरु" को कप्तान थियो। ग्रेगरी Malygin Jokes लेखन र विनोदी दृश्य सिर्जना संलग्न। टोलीमा 1998 मा मेजर लिग को शीर्षक जीत व्यवस्थित। टोली "DLSH" युक्रेन कप (2000) को KVN र काजाकिस्तान (2001) को मालिक भयो।
2000-2001 मा। Malygin राष्ट्रिय टोली "साइबेरियन Siberians", को टोली "इर्कुत्स्क Decembrists", "DLSH" र अरूलाई प्रतिनिधिको समावेश जो प्ले। कलात्मक निर्देशक र कप्तान - ग्रेगरी बस दुई मानार्थ स्थितिहरू सुम्पिएको। 2000 मा, "साइबेरियन Siberians" को "सुनको ठूलो KiViN" को को मुख्य को Jurmala तिहार मा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। र अर्को सिजन टोलीमा सफलतापूर्वक प्रिमियर लिग मा प्रदर्शन र अर्ध-फाइनल पुगेको छ।
हाम्रो नायक अन्तमा मास्को सारियो। पहिलो, उहाँले "Ostankino" टिभी स्कूल साथ दिए। प्रतिभाशाली मान्छे गरेको ज्ञान र व्यावहारिक अनुभव गर्यो।
2006 देखि, Malygin KVN को वार्षिकोत्सव समर्पित विशेष परियोजनामा भाग। केही वर्षपछि उहाँले रचनात्मक संघ, "लेफ्टिनेन्टस्क्याट श्मिट को बच्चाहरु" भनिन्छ स्थापित। ग्रेगरी संगीत र विभिन्न घटनाहरू मा एकल वा जोडी प्ले।
हास्य अभिनेता आफैलाई एउटा चलचित्र मा प्रयास भएको थियो। Filmography ग्रेगरी Malygina धेरै भूमिकाको प्रतिनिधित्व। हामी आफ्नो सहभागिता साथ सबैभन्दा ज्वलन्त र स्मरणीय तस्वीर सूची:
«एफएम र छोराछोरीलाई" (2001);
"लोखर्के दिन" (2003);
"समुद्री शेयर" (टी वी श्रृंखला) (2004);
"सँगै आनन्दित" (श्रृंखला "सबै भन्दा राम्रो") (2006);
"Lavrov विधि" (2012)।
प्यारा र हास्यास्पद मान्छे सधैं विपरीत सेक्स संग लोकप्रिय। तर यो एक महिलाहरु 'मानिस र महिला हृदय विजेता हो।
ग्रेगरी Malygin (फोटो हेर्नुहोस्। माथि) एक महान् प्रेम विवाह। आफ्नो विकल्प एक स्टाइलिस्ट, मेकअप कलाकार भिक्टोरिया थियो। त्यो आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य र नम्रता लागि हास्य अभिनेता जित्यो। केही समय पछि विवाह Grisha र विकी लिए। यो समारोह दुवै पक्ष बाट दुलही र दुलहा को सहयोगिहरु, साथै नातेदार उपस्थित थिए।
चाँडै, जवान पत्नी हास्य अभिनेता पहिलो बच्चा दिनुभयो - छोरी क्रिस्टिना। Malygin परिवार संग खर्च गर्न धेरै समय खोजे। भिक्टोरिया आफ्नो बच्चा राम्रो बुबा थाह बस छैन पाउन। Grisha आफूलाई swaddled र क्रिस्टिना bathed, खेले र उनको कुरा।
परिवारमा केही वर्ष पछि Malygina पुनःभरिएको गरिएको। लामो-प्रतीक्षा छोरा प्रकाश गर्न। एक केटा आर्थर नाम।
ग्रेगरी Malygin: मृत्यु को कारण
जुलाई 2012 मा, प्रसिद्ध humorist brutally आक्रमण गरिएको। अज्ञात अचाक्ली कुटपिट र Grisha robbed थियो। डाक्टर आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्न सक्षम थिए। तर अभिनेता लामो पुनर्वास सामना गर्नुपरेको थियो।
त्यसै वर्ष को अगस्ट मा ग्रेगरी Malygin Gelendzhik मा तिहार मा "DLSH" टोली बोल्न निर्णय गरे। डाक्टर र नातेदार विचार उहाँलाई dissuade गर्न खोजे। तर हास्य अभिनेता कुनै सुनेनन्। उहाँले तिहार गए। Malygin चरण देखि joked र हास्यास्पद स्केचहरू भाग रूपमा दर्शक हेर्नुभयो। कसैले पनि यो समयमा कलाकार दुखाइ overcomes कि छैन कल्पना सक्थे। मास्को फिर्ता, Grigory खराब लाग्यो। तिनीहरूले अस्पतालमा उसलाई, तर केही दिन पछि discharged थियो।
21 सेप्टेम्बर, 2012 Malygin आफ्नो मास्को अपार्टमेन्ट मा मृत्यु भयो। मृत्युको आधिकारिक कारण - हृदयघात।
Evgeniy Donskih: जीवनी र काम
हास्य अभिनेता Vetrov Gennady: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
अन्ना Nedelko: संग र बिना KVN जीवन
Flashmob। यो के हो?
विश्वास होमर सिम्पसन
को गणना गर्न साँचो - पांच बाटो!
निर्माण समस्या, गरिब निर्माण को मुख्य कारण र कसरी यो समाधान गर्न
जिब्रोको मा अल्सर
उद्देश्य, सञ्चालन सिद्धान्त, विशेषताहरु: देखि धूलो चक्रवात हावा सफाई
कसरी एक केटी खुसी पार्न
कुलीन रक्सी "Sassicaia": विवरण, इतिहास, समीक्षा र रहनसहन
होटल Sphinx बीच Resort एक्वा पार्क5* (मिश्र / Hurghada): फोटो र समीक्षा
"Akana" (कुकुर खाना): ग्राहक समीक्षा। कुकुर लागि खाद्य "Akana"
पुष्टि गर्न विश्वसनीय अलार्म: छनौट र समीक्षा सुझावहरूको